Kungani kuphuthuma ukubhekana nemiphumela yezempilo yokuguquka kwesimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ezikhathini zamuva nje, izimo zezulu ezifana neziphepho noma iziphepho seziye zaba zimbi kakhulu. Njengoba izinga lokushisa lomhlaba wonke likhuphuka, sonke esihlala kule planethi kufanele sivumelane nezimo ngangokunokwenzeka ukuze sisinde. Kepha uma kukhona noma yimuphi onezinkinga ezinkulu, lowo ngumuntu.
Linqobe wonke amagumbi omhlaba; kodwa, ngokwesifundo esisodwa, ukubhekana nemiphumela yezempilo yokuguquka kwesimo sezulu kuyaphuthumangaphandle kwalokho imiphumela ingaba yingozi.
Ukuhlangabezana nesimo esibi kakhulu njengesomiso noma ukushisa kungathinta impilo yakho, ngokomzimba nangokwengqondo, ikakhulukazi uma ulahlekelwa ngumuntu siqu, esikhathini esifushane nesikhathi eside. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuhlola ithonya lezehlakalo ezimbi kakhulu empilweni yomuntu, ngokocwaningo olushicilelwe kwiJournal of the Air & Waste Management Association.
UDkt Jesse Bell weNorth Carolina Institute for Climate Studies ukusho lokho ukulungiselela ukubhekana nezinhlekelele nokuqonda izindlela eziningi eziyinkimbinkimbi lapho izehlakalo zesimo sezulu esibi zithinta impilo kubalulekile. Ngaphezu kwalokho, izikhungo zezempilo kumele ziphenye ukuba sengozini kwengqalasizinda yendawo ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwabasebenzi neziguli uma kwenzeka umcimbi omkhulu, ngoba ngokwesibonelo kunezibhedlela ezitholakala ezindaweni ezivame ukuba neziphepho.
Njengoba isimo sezulu sishintsha izinkambiso zomlando ngeke zanele ukuqonda ubudlelwane obuphakathi kwemicimbi yesimo sezulu esibi nemiphumela yezempilo yomphakathi. Ngalesi sizathu, izinhlelo ezididiyelwe zezikhungo, uhulumeni kanye nezinkampani ezizimele zizodingeka ukwakha kabusha izakhiwo ezonakele kodwa futhi nokuxhasa izisulu, ikakhulukazi izingane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Kungani kuphuthuma ukubhekana nemiphumela yezempilo yokuguquka kwesimo sezulu?